Capsule santionany Machine
Tablet santionany Machine
ho an'ny hafa
Manavaka / Nikosokosoka Machine
Manasa-mandeha ho azy Vacuum Decapsulator
Deblistering Machine sns-120AL
Deblistering Machine sns-120A
Deblistering Machine sns-60N
Deblistering Machine sns-60A
Io banga decapsulator tsy ampy ho an'ny rehetra capsules salantsalany, tsy misy ny fanovana ilaina faritra.
• madio vovoka manavotra, no rava akorany.
• Efa ho 100% capsule misokatra tahan'ny.
• Vonjeo ny fotoana sy ny fandaniam-poana.
• Ataovy amin'ny ara-dalàna capsules amin'ny hafainganam-pandeha avo.
• Asaovy manisy ratsy mihitsy amin'ny fitondrana / bala / takela-bato ao anatin'ny capsule.
• ampiharina akory capsules salantsalany.
• Air no hany fitaovana fifandraisana amin'ny vovoka; tsy misy aretina.
• azo ampiasaina capsule akorandriaka aorian'ny fisarahana.
• mety miasa, ka omeo toerana.
azo ampiharina Range
000 #, 00 #, 0 #, 0el, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 # hafa mafy capsules
Manaraka: Capsule Separating Machine , Capsule Opening And Powder-taking Machine(CS3-A)
feno Capsule kilema
Ahoana no hiatrehana Bad Capsules
Ahoana no hanokatra Capsules
Material Retrieving Machine
fanafody Capsule vahaolana Provider
Recovery Of Product Avy Capsules
Efa nanorina ny tambajotra ny mpiasa any amin'ny ankamaroan'ny firenena mba hanome mpanjifa tsy hanahirana. Fa ny fanontaniana momba ny vokatra na pricelist, Masìna ianao, avelao ny mailaka ho antsika Izy ary ho mifandray ao anatin'ny 24 ora.